बुद्धिमान मानिसका ३ खराब आनीबानी, कतै तपाइँ त पर्नुभएन ? - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७४ चैत ८ गते १०:५७ मा प्रकाशित
दिमाग त सबै मानिसको हुन्छ । तर बुद्धि चाहीँ सबैको बराबर कहाँ हुन्छ र ? कतिपय निकै बुद्धिमान, कोही मध्यम त कोही मन्द बुद्धिवाला । बुद्धिमान मानिसले आफ्नो अगाडि आउने धेरै समस्याको समाधान आफै खोज्न सक्छन् सबै क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्छन् ।
तर यस्ता बुद्धिमान मनिसका पनि केही खराब आनीबानी चाहीँ हुन्छन् नै । बुद्धिमान मानिसमा हुने भनिएका तिनखाले खराब बानी व्यहेरा यी हुन्ः